कपिलवस्तुमा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारको गोली हानी हत्या::Online News Portal from State No. 4
कपिलवस्तुमा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारको गोली हानी हत्या
शंकास्पद २ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
कपिलवस्तु, ८ मंसिर – कपिलवस्तुमा एक जनाको गोली हानी हत्या भएको छ । शुद्धोधन गाउँपालिका ४ मोतिभारीका दिपेन्द्र कुमार चौधरी (राजा बाबु)को हत्या भएको हो । उनी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कपिलबस्तु क्षेत्र नं. १ ‘ख’बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । उनलाई घर नजिकैको सडकमा अज्ञात समुहले गोली हानेर घाइते बनाएको थियो ।
उनलाई तत्काल लबनी स्वाथ्य चौकीमा उपचार गर्न लगिएको थियो । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि मेडिकल कलेज पुर्‍याउँदा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलले जानकारी दिए । शंकास्पद २ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको रावलले जानकारी दिए । घटनास्थलमा गोलीका ३-४ वटा खोका भेटिएको थियो ।